FLV in MPEG- Sida loo Beddelaan FLV in MPEG
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan FLV in MPEG
MPEG qaab video waa heerka riixo caalami ah loogu socon sawirada. Faa'iidada ugu weyn ee MPEG qaab video waa in MPEG qaabab file video jira wax badan oo yar yar ee tayada la mid ah, marka la barbar dhigo video kale iyo qaabab sireed audio. Sidaas darteed haddii aan diinta ku FLV flash oo caan ah si MPEG, waan ku guuleysan karnaa xiiso badan oo dheeraad ah ku jira nolosha digital.
Si loogu badalo FLV video in MPEG, waxaan u baahan nahay in FLV MPEG Video Converter , taas oo ah qalab si sahlan loo isticmaalo kaas oo kaa caawinaysaa in aad ka format FLV badalo videos in qaab MPEG gudahood kaliya 4 tallaabooyin.
1. Ku dar FLV video
Guji "File" liiska, ama guji "Add Files" badhanka (la daray icon a), iyo dooran video FLV aad rabto in aad si loogu badalo.
Haddii aadan u baahnayn in aad xaalkaa video, waxaad ka boodi kartaa tallaabadan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad video ka kaamilsan, ama si aad u dhadhan gaar ah la sameeyo, waxaad riixi kartaa "Edit" button in bar file ah, ama file click xaq u dooro "Edit" doorasho (qalin jaale icon), si ay u edit aad FLV by lana siii, isagoo intaa ku daray saamaynta, iwm
Qaab saarka 3. Set sida MPEG
Guji "Qaabka Output" qaab icon, oo aad sameyn kartaa wax soo saarka profile sida qaab MPEG. Waxaa intaa dheer, waxa aad furan kartaa "Qaabka Output" liiska hoos-hoos si ay u astaysto wax soo saarka aad video.
4. U beddelaan FLV in MPEG
Riix ah "Beddelaan" button in interface ugu weyn, iyo diinta ka FLV in MPEG bilaabmin. Guji "Output Folder" liiska hoos-hoos u dhigay meesha aad rabto si uu u badbaadiyo files gediyay.
Iyadoo FLV in MPEG Video Converter , sidoo kale si fudud aad u bedeli karaan video dhexeeya dhammaan noocyada kala duwan ee ah qaabab kale, iyo Macdan audio aad video ka loogu talagalay iyo Raaxo.